Mon - Sat ngo-9:00 AM kuya ku-6:00 AM
Ubumsulwa obuphakeme 6FDA
I-PEPA / 4-PEPA
I-TFMB / TFDB
I-FDA / BAFL
I-DAPBI / APBIA
I-TPE-M / APB
I-DEDC / ODBC
Imininingwane yethu yakamuva.
ngu admin ngo 20-04-27
I-polymer ichazwa njengenethiwekhi enkulu yama-molecule aqukethe amayunithi amaningi okuphindwayo. I-polyimide uhlobo oluthile lwe-polymer, oluqukethe ama-monomers angama-imide. Ama-polyimides afiseleka kakhulu ekumelaneni kwawo nokushisa, amandla e-mehendi, nezakhiwo ezifakwayo. Kuyini Imide? Ukuthola ...
I-polyimide isetshenziselwa ini? I-Polyimide isetshenziselwa i-tubing yezokwelapha, isib. Catheters ye-vascular, ekuqotheni kwengcindezelo yayo yokuqhuma kuhlangene nokuguquguquka nokwenqaba kwamakhemikhali. Imboni ye-semiconductor isebenzisa i-polyimide njenge-adhesive ephezulu yokushisa; sisetshenziswa njenge-buffer yokulungisa imishini. ...
Njengombhalo okhangayo we-dielectric, i-polyimide isetshenziswe kabanzi emkhakheni we-elekthronikhi, i-aerospace, nezimoto ezigcwalisa isidingo esandayo sezinto zokwakha ezingenza kahle ngaphansi kwezimo ezinzima, njengamazinga okushisa aphakeme. Ama-polyimides ayisigaba esibalulekile sokukhula kancane kwe-polym ...
IShanghai Daeyeon Chemicals Co, Ltd.